Biobank Series ibonelela abasebenzisi oluzenzekelayo, ekhuselekileyo kwaye ethembekileyo ulwelo cryogenic iinkqubo zokukhenkceza nitrogen. Iitanki zenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu, exhotyiswe ngee-casters kunye neziqhoboshi, kunye nokuvulwa kwentamo ebanzi ukuze kube lula ukukhetha kunye nokubeka i-specimen.I-specimen inokugcinwa kulwelo okanye umphunga, kwaye inkqubo yokulawula ibonelela ngokulula kunye nokhuseleko. Ukufezekisa umsebenzi wezoqoqosho kakhulu, uyilo lwethu luqinisekisa ukusetyenziswa okuphantsi kwe-nitrogen engamanzi kunye nobukhulu bokugcina umthamo we-specimen.
Wide neck laboratory series ulwelo itanki nitrogen
Wide neck laboratory series ulwelo nitrogen itanki ineenzuzo umthamo omkhulu kwaye kulula ukuyibeka kwaye ukhethe iisampuli. Isetyenziselwa ikakhulu ukugcinwa kwexesha elide lweesampulu zebhayoloji kwaye zifuna ukutsalwa rhoqo kweesampulu.
Uluhlu lokugcina oluzinzileyo luneenzuzo zokugcina ixesha elide kunye nomthamo omkhulu; yenzelwe ngokukodwa ukugcinwa kwexesha elide kwi-static yeesampuli zebhayoloji.
Uthotho oluphathekayo lubandakanya iimodeli ezi-6. Kulula ukuthwala. Ziyilelwe ikakhulu ukuthwalwa kwenkunzi yenkomo kunye nesampulu zebhayoloji.
uthotho lokugcina ulwelo itanki yenitrogen yenzelwe ukuthuthwa komgama omde wenitrogen engamanzi okanye iisampulu zebhayoloji. Isebenzisa uyilo lwenkxaso ekhethekileyo kwezi zikhongozeli.
Dry Shipper series liquid nitrogen itanki yenzelwe ukuhanjiswa kweisampulu zebhayoloji kwiaircraft.There is special adsorption material ngaphakathi kwesikhongozeli ukufunxa nokugcina ulwelo lwenitrogen, ukuthintela ukuphuphuma kwenitrogen yolwelo ngexesha lokuziswa. Isebenzisa umnatha okhethekileyo wentsimbi engatyiwayo ukwahlula indawo yokugcina kunye nezinto zokufunxa, ukunqanda imathiriyeli yokufunxa initrogen exutywe kwisampulu.
I-Liquid Nitrogen Filling Tank Series
Uthotho lwetanki yokuzalisa initrogen yolwelo lusebenzisa ulwelo oluncinci lwenitrogen yokufunxa ukunyusa uxinzelelo ngaphakathi kwetanki, ukuze itanki ikhuphe ngokuzenzekelayo initrogen engamanzi kwezinye izikhongozeli. Isetyenziswa ikakhulu ukuthutha nokugcina ulwelo oluphakathi kwaye kwakhona ibe ngumthombo obandayo wezinye izixhobo zesikhenkcisi. I-terminal yokulawula esweni kunye nesofthiwe inokudityaniswa ukuhambisa inqanaba le-nitrogen elikude kunye nedatha yoxinzelelo kunye nokuqonda umsebenzi we-alarm ekude kwinqanaba eliphantsi kunye noxinzelelo oluphezulu, kunokunyanzeliswa koxinzelelo ngesandla kunye nokude ukulawula ukuzaliswa. Itanki yokuzalisa i-nitrogen ye-liquid isetyenziswa ngokubanzi kwishishini le-mold, ishishini lemfuyo, i-Medical, i-semiconductor, ukutya, ikhemikhali yobushushu obuphantsi, i-aerospace, umkhosi kunye noshishino olunjalo kunye nommandla.
Ulwelo lweNitrogen Bio efrijini
Ulwelo nitrogen zebhayoloji ifriji ngenkangeleko inoveli kunye nengqiqo enamandla izixhobo zonyango ilungele zonke iintlobo iibhanki isampuli, izibhedlele kunye neelebhu.
I-Smart Cap isithinteli sophula indlela yemveli yokulinganisa inqanaba lolwelo kwitanki yenitrogen engamanzi, kwaye inokuqonda ixesha lokwenyani lokujonga ubushushu kunye nenqanaba lolwelo kwitanki ngaphandle kokuvula isiciko. Ukubeka iliso ngokupheleleyo kwindawo yokugcina iisampuli kwitanki yokhuseleko.
Ulwelo nitrogen umatshini ice cream
Ubushushu obuphantsi be-Haishengjie budityaniswe neshishini le-ice cream lasekhaya uphuhliso lwe-ice cream liquid nitrogen umatshini wokuzalisa ngokusebenza okulula, kulula ukuyisebenzisa, inzuzo ephantsi.
Itanki yokukhenkceza ukutya kwaselwandle
Ngosukelo olunzulu lwabantu kunye nokonwabela ukutya, inkampani yethu iphuhlise ngokukodwa iTanki yokukhenkcisa ukutya kwaseLwandle.Ifriji yenitrogen eyiLiquid ngoku iqatshelwa njengeyona ndlela inobubele bokusingqongileyo, esebenzayo kunye neyoqoqosho lokupholisa kwisayensi yokutya kunye nobuchwepheshe. Nokuba ikhenkce ixesha elide, iya kuqinisekisa ukuthungwa okugqwesileyo.